Showroom Sales Engineer | I.E.M Co., Ltd. ﻿
Showroom Sales Engineer
2.1.2019, Full time , Trading
•	ပြောဆိုဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ပြီး Presentation ကောင်းသူဖြစ်ရမည်။
•	BE ( EP/EC ) ဘွဲ့ရ သို့မဟုတ် အခြားဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီး Engineering Product များကိုစိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။
•	English4Skills အတင့်အသင့်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ရုံးနှင့်နီးသူ / ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဦးစားပေးမည်။
•	Computer / Excel အခြေခံကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Work location အရှေ့မြင်းပြိုင်ကွင်းလမ်း, တာမွေမြို့နယ, ရန်ကုန်
Job Function: Showroom Sales Engineer
Job posted: 2/1/2019
Sales Executive & Sales Engineer
•	လျှပ်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို နေရာဒေသမရွေး မိမိတို့၏ product များကို ရောင်းချနိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိဌာနကြီးမှူး၏ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ •	Customer များနျှင့် အ� ...
Sales Engineer/Assistant Sales Engineer
10 Days, Full time , Trading
•	လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို နေရာဒေသမရွေး သွားရောက်ရောင်းချနိုင်ရမည်။ •	Delivery , Cash Collect , Order , Marketing , Follow up , Trip Way ,Documentation အစရှိသည်များကို မိမိဌာနကြီးမှူး၏လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ •	Customer များ� ...
Co-ordinator ( MD Office )
13 Days, Full time , Trading
•	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
111 Days, Full time , Trading
•	Support to Superior and Manager to updates and maintains of HR Handbook , HR policies and rule & regulation . •	Prepare andarrange the interview schedules . •	Coordinates and negotiates with related HODs for interview schedules and to recruit effective new employees. •	Prepares offer letter for selected candidates. •	Arrange for orientation program to new employees. •	Assist the GM and Manager to get the right benefits for the staff. •	Assist the GM and Manager for staff management activities with records. •	Keeping ...
Assistant Manager ( Distribution )
•	Excellence in conceptual and analytical skills. •	Excellent in communications , customer services ,presentation and negotiation skills
112 Days, Full time , Trading
•	BE ( EP/EC/MP ) ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	Project Management/ Business Management နှင့်ပတ်သက်သည့် Diploma တစ်ခုခုရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည်။( MBA ရရှိပြီးသူဖြစ်ပါကဦးစားပေးစဉ်းစားမည်။ )
•	နယ်အရောင်းထွက်ရမည်။ပစ္စည်းစစ်ရမည်။ပစ္စည်းပို့ရမည်။ •	ကျွမ်းကျင်စွာကားမောင်းနိုင်ပြီး အရောင်းကျွမ်းကျင်ရမည်။ •	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။
•	ဌာန ကြီးမှူး၏ညွန်ကြားချက်များကို တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်။
•	Distribution Department တွင် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးငွေလွှဲများချိတ်ဆက်ပေးရမည်။ •	လွှဲငွေနှင့် သက်ဆိုင်သော Customer များအားအကြောင်းကြားပေးရမည်။Credit စာရင်းရှင်းတမ်းများရေးသွင်းခြင်း၊စာရင်းတိုက်ခြင်း၊တောင်းခြင်းပြုလုပ် ...
•	BE ( EP/EC/MP ) ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	Project Management / Business Management နှင့်ပတ်သက်သည့် Diploma တစ်ခုခုရရှိထားသူ ဖြစ်ရမည်။
Admin Deputy Manager/ Manager
•	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Customers များအားမိမိကုန်ပစ္စည်းများကိုစိတ်ရှည်စွာရှင်းပြနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားပြီးပြင်းပြသည့်ဖြစ်ချင်ရှိသူများအားဦးစား� ...
•	Admin လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား ဌာနကြီးမှူး၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
•	ပြောဆိုဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားပြီး စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရှိသူ။
ဌာန ကြီးမှူး၏ညွန်ကြားချက်များကို တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်။
Sale / Service Engineer
•	ဌာနကြီးမှူး၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ - ဌာနကြီးမှူး၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
•	Perform indoor and outdoor services of UPS/AVS at customer sites in Yangon and remote areas •	Execution of survey & calculation for estimated load of UPS/AVS at customer sites in Yangon and remote areas •	Perform test and repair UPS,AVS,VSD and other electrical devices at service center and main warehouses of company •	On-site installation and commissioning of new UPS,AVS, VSD and other electrical products at customer sites in Yangon and remote area •	Technical support to customers for their requirements of electrical appl ...
•	မိမိတာဝန်ယူရောင်းချပေးရသည့် Electrical Product များနှင့်ပတ်သက်သည့် Sale Target များပြည့်မှီအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမည်
Supervisor ( Plantation )
•	စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပက်သက်၍ အတွေ့အကြုံ (၇) နှစ်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ (ကော်ဖီခြံစိုက်ပျိုးရေးအတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ ) •	စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား စီမံရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်ရ� ...
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Project Co-ordinator & Assistant Manager
•	BQ / Estimate နှင့် Design ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများလုပ်ဆောင်ရမည်။ Project ဌာန၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဌာနကြီးမှူး၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆောင်ရါက်ရမည်။
•	Warehouse /store နှင့် ပတ်သက်သည့် Ledger အ၀င်အထွက်စာရင်းများ၊Computer Excel, Software စာရင်းများသွင်းခြင်းကို မိမိဌာနကြီးမှူးများ၏လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း တိကျစွာ လုပ်ဆောင်ပေးရမည်။
Deputy-Assistant Service Manager
•	Conduct discussions with field team members •	Developacomprehensive understanding of operations prior to beginning the Test Run and Commissioning. •	Install and commission critical power supply equipment and associated electrical equipment, etc. •	Provide recommendations and develop specific action plan with the local field team •	Disseminate best practices for performance improvement •	Follow-up on quality, maintenance action plans for operational improvement •	Operations Assessments and processes mapping •	Pe ...
•	BE ( EP/EC ) ဘွဲ့ရ သို့မဟုတ် အခြားဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီး Engineering Product များကိုစိတ်ပါဝင်စားသူဖြစ်ရမည်။ •	ပြောဆိုဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ပြီး Presentation ကောင်းသူဖြစ်ရမည်။
•	မန္တလေးရုံးခွဲတွင်ရှိသော Warehouse / Store များနှင့်ပတ်သက်သည့်Stock Control တာဝန်များအား ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
•	စကားပြောပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည်။ •	လူမှု့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	ရိုးသားကြိုးစားပြီး စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရှိသူ။
Senior M & E Engineer
•	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ အများနှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Position - Senior M & E Engineer •	Department - Project •	Report To - Executive Director
Assistant Manager/ Manager ( Sales )
•	မိမိတာဝန်ယူရောင်းချပေးရသည့် Electrical Product များနှင့်ပတ်သက်၍ Sale Plan ရေးဆွဲခြင်း ၊ Sale Team ကိုဦးဆောင်ခြင်း နှင့် •	Sales Target များပြည့်မှီအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းစသည့် Sale Functions များဆောင်ရွက်ရမည်။
•	Check & Preparing of M&E Drawing (Auto CAD) •	Preparing BQ List , to check sub contractors Quotation. •	Scheduling of Installation ,Supervising site survey ,Delivery. •	Customer Negotiation ,Dealing with sub contractor. •	After sales service co-operation.
•	မိမိတာဝန်ယူရောင်းချပေးရသည့် Product များနှင့် ပတ်သက်၍ Sales Plan ရေးဆွဲခြင်း၊ Sales Team ကိုဦးဆောင်ခြင်းနှင့် Sales Target များ ပြည့်မှီအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည့် Sales Function များဆောင်ရွက်ရမည်။ •	တာဝန်ယူရမည့် Department - Power System Solution Departmen ...
•	မိမိတာဝန်ယူရောင်းချပေးရသည့် Electrical Product များနှင့်ပတ်သက်၍ Sale Plan ရေးဆွဲခြင်း ၊ Sale Team ကိုဦးဆောင်ခြင်း နှင့် •	Sales Target များပြည့်မှီအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းစသည့် Sale Functions များဆောင်ရွက်ရမည်။ Assistant Manager/ Manager ( Sales )
Sale Executive & Sale Engineer
•	Solar Accessories ( သို့ ) Cable Wire (သို့) UPS (သို့) Generator ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများကို မိမိဌာနကြီးမှူး၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်းတိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ Sale Executive / Sale Engineer
136 Days, Full time , Trading
•	ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ ( MBA (or) MPA ဘွဲ့ရရှိထားသူများကိုဦးစားပေးမည် ) •	လုပ်ငန်းအတွ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၈) နှစ်ရှိသူဖြစ်ပြီး Admin Manager ရာထူးဖြင့် အနည်းဆုံး ( ၃ ) လုပ်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ •	Administration လုပ်ငန်းစိန ...
•	Position - Manager •	Department - Project •	Report To - Executive Director •	Leadership Skill & Negotiation Skill အထူးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	Perform indoor and outdoor services of UPS/AVS at customer sites in Yangon and remote areas •	Execution of survey & calculation for estimated load of UPS/AVS at customer sites in Yangon and remote areas •	Perform test and repair UPS,AVS,VSD and other electrical devices at service center and main warehouses of company •	On-site installation and commissioning of new UPS,AVS, VSD and other electrical products at customer sites in Yangon and remote are •	Technical support to customers for their requirements of electrical applic ...
Marketing Assistant Manager /Deputy Manager
•	IEM Co.,Ltd. ကဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသည့် Electrical Product များနှင့်ပတ်သက်သည့် Marketing Functions များအားဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
•	လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၍ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	တာမွေ၊ ရန်ကင်း ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်များတွင်နေသူများအား ဦးစားပေးစဉ်းစားမည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းခန� ...
163 Days, Full time , Trading
165 Days, Full time , Trading
•	ဌာနကြီးမှူး၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း တိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးရမည်။
Project Co-ordinator/Assistant Manager
Deputy/Assistant Service Manager
DUTIES AND RESPONSIBILITIES : maintaining, servicing, and troubleshooting UPS systems, batteries,and other critical infrastructure equipment in CRITICAL POWER systems •	Conduct discussions with field team member •	Developacomprehensive understanding of operations prior to beginning the Test Run and Commissioning. •	Install and commission critical power supply equipment and associated electrical equipment, etc. •	Provide recommendations and develop specific action plan with the local field team •	Disseminate best practices fo ...
•	တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်သူအားဦးစားပေးစဉ်းစားမည်။ •	အသက်(၂၅) နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။
•	မန္တလေးရုံးခွဲတွင်ရှိသော Warehouse / Store များနှင့်ပတ်သက်သည့် Stock Control တာဝန်များအား ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
186 Days, Full time , Trading
Showroom Sales Engineer Sales - Engineer/Tech/IT Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon I.E.M Company Limited Sales - Engineer/Tech/IT Jobs Sales - Engineer/Tech/IT Jobs Showroom Sales Engineer Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Rakhine State Today